महरा रोशनीको घरमा पुगेको सीसीटीभी फुटेजमा देखियो ! – Life Nepali
महरा रोशनीको घरमा पुगेको सीसीटीभी फुटेजमा देखियो !
असोज १६, काठमाडौं । यौ*न हिं*साको सिकार भएको भन्दै मिडियामा आएकी रोशनी शाहीले मंगलबार साँझ आफ्नो बयान फेरेपनि प्रहरी अनुसन्धानले तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा उनको निवास पुगेको पु ष्टि गरेको छ । प्रहरीले संकलन गरेको सीसीटीभी फुटेजमा म हरा निजी सुर क्षाकर्मी नै लिएर त्यहाँ पुगेको देखिएको छ । स्रोतका अनुसार उनी त्यहाँ पुगेको सूचनाको प्राविधिक विश्लेषण गरेर प्रहरीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जानकारी गराएको थियो । आजको कान्तिपुरमा समाचार छापिएको छ,
स्रोतबाट कान्तिपुरलाई प्राप्त जानकारीअनुसार साँझ ७ बजेर ६ मिनेटमा महराको गाडी शाहीको निवासछेउमा रोकिएको थियो । एक घण्टा १९ मिनेटपछि ८:२५ मा उनी त्यहाँबाट फर्किएका थिए । त्यहाँबाट महरा सोझै सभामुख निवास बालुवाटार पुगेका थिए । प्रहरीले बालुवाटार क्षेत्रबाट पनि सीसीटीभी फुटेज संकलन गरेको थियो, जसमा महरा ८ बजेर ५३ मिनेटमा निवास प्रवेश गरेको देखिन्छ । प्रहरी परिसर काठमाडौं र महानगरीय प्रहरी वृत्त बानेश्वरको टोली बुधबार साढे ९ बजेतिर शाहीको कोठामै गएर घ टनाबारे थप बुझेको थियो । त्यतिबेला पनि शाहीले आपसमा बाझिने गरी घ टनाबारे बताएकी थिइन् ।
प्रहरीले लिखित जाहेरी दिन आग्रह गर्दा उनले श्रीमान् आएपछि मात्रै आफूले निर्णय लिने बताएकी थिइन् । अ घिल्लो दिनसम्म आ फूमाथि यौ*नहिं*सा भएको बताउँदै प्रहरीको टोल फ्रि नम्बर एक सयमा कल गरेकी र केही अनलाइन सञ्चारकर्मीसँग घटना सुनाएकी उनी ४८ घण्टाभित्रै ‘युटर्न’ भइन् । शाहीले सोमबार आफैंले दिएको अन्तर्वार्ताभन्दा ठ्याक्कै विपरीत खालको अन्तर्वार्ता मंगलबार दिइन् । उनले मंगलबारको अन्तर्वार्तामा महरा आफ्नो घरमै नआएको दाबी गरिन् । मंगलबार दिनभरजसो मोबाइल फोन अफ गरेर सम्पर्क बा हिर रहेकी शाहीले अन्तर्वार्ता दिएपछि मात्रै आफ्नो मोबाइल अन गरेकी थिइन् ।
उनले बयान फेरेको विषयमा मंगलबार राति कान्तिपुरले उनीसँग जिज्ञासा राखेको थियो । जवाफमा उनले यो विषय बन्द भइसकेको उल्लेख गर्दै भनिन्, ‘यस्ता झिनामसिना कुरातिर नजाम् के । आ–आफ्नो काम गर्नुस् ।’ शाहीले बुधबार साँझ महानगरीय प्रहरी वृत्त बानेश्वरमा लिखित निवेदन दिँदै आफूमाथि यौ*न दु*र्व्यवहार भएको भनी मिडियामा आएको कुरामा सत्यता नरहेको उल्लेख गरेकी छन् । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका डीएसपी होबिन्द्र बोगटीका अनुसार उनले निवेदनमा डिप्रेसनका बेला होसमा नभएर मिडियामा बोलेको जनाएकी छन् । शाहीले ४८ घण्टाभित्रै किन बयान फेरिन् भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्न प्रहरीले चासो देखाएको छैन ।
यसबारे राज्यका अन्य निकायले पनि चासो लिएको देखिँदैन । बरु उनी अ*सुरक्षित हुन सक्ने वा भावावेशमा अ*प्रिय निर्णय लिन सक्ने भन्दै प्र हरी प रिसर काठमाडौंले उनको सु रक्षामा एक असई र एक महिला प्रहरी खटाइदिएको छ । यो घ*टनाको अनुसन्धानमा सं*लग्न एक प्रहरी अधिकारीले भने मंगलबार बिहानपछि अपराह्न ४ बजेसम्म महिला सम्पर्कबाहिर रहेको र त्यही समयमा उनी आफ्नो बयान फेर्न दबाबमा परेको हुन सक्ने सुनाए । घ*टना सा र्वजनिक भए पछिको अवधिमा शा ही परिवार वा नातेदारको साथमा नहुनु र महरासँग निकट व्य क्तिहरूको सम्पर्कमा पुग्नुबाट पनि उनी द*बाबमा परेको आ शंका जन्मिन्छ ।
अ*पराध पी डित सं रक्षण ऐन २०७५ ले पनि पी डितलाई राज्यले नै संरक्षण दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त ऐनको दफा १० मा पीडितलाई अभियुक्त, कसुरदारबाट पी डित वा पी डितमा आश्रित व्य क्तिवि रुद्ध हुन सक्ने आक्रमण, क्ष ति, ड र, त्रा*स, ध म्कीबाट सुरक्षित हुन पाउने अधिकारको व्याख्या गरिएको छ । तर शाहीले राज्यबाट यस्तो सुरक्षाको प्रत्याभूति पाएको देखिँदैन । काठमाडौं बा हिर रहेका उनका श्रीमान्ले पनि घ टनाको सन्द र्भमा साथ दिएको देखिँदैन । बरु उनका श्रीमान् घ टना सार्वजनिक भएपछि निरन्तर महरा र उनी निकटका मान्छेसँग सम्पर्कमा रहेको र घ टना मिलाउने आश्वासन आरोपित पक्षलाई दिएको देखिन्छ ।
अधिवक्ता मिरा ढुंगानाले आफ्नो समस्याबारे प्रहरीलाई मौखिक जानकारी गराएपछि पी*डितलाई संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हुने बताइन् । उनले यो घ टनामा पी*डित मा नसिक द बाबमा परेको र राज्यबाट पाउनुपर्ने सु रक्षा नपाएको बताइन् । ‘प्रतिवादी पक्ष श क्तिशा ली व्य क्ति हुनेबि त्तिकै पी डितलाई खुल्न, आफ्नो भनाइमा टिकिराख्न गा ह्रो हुने गर्छ,’ उनले भनिन्, ‘झन् यो घ टनामा त पी डितलाई श्रीमान्बाटै पनि साथ नभएको देखिन्छ ।’ पी डितले बयान किन फेरिन् वा त्यस निम्ति उनलाई क–कसले कसरी बाध्य पार्‍यो भन्ने विषय अर्को अनुसन्धानको विषय भएको ढुंगानाले बताइन् ।
प्रहरीले लिखित जाहेरीलाई प्राथमिकता दिएको र महिलाले एक सयमा खबर गरेपछि राजनीतिक नेतृत्वलाई घटनाबारे जानकारी गराएर आदेश पर्खिने शैली अपनाएको देखिन्छ । अधिवक्ता ढुंगानाको बुझाइमा पी*डितले जानकारी टिपाउनु नै सबैभन्दा बलियो प्रमाण मान्दै अनुसन्धानलाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा प्रहरी चुकेको छ । मंगलबार आफ्नो पूर्वभनाइसँग बाझिने गरी नागरिकखबर डटकमलाई अन्तर्वार्ता दिनुअघि शाही सामाखुसी क्षेत्रमा पुगेको देखिन्छ । त्यहाँबाट सोह्रखुट्टेस्थित एक आफन्तको घरमा बसेर उनले आफ्नो पूर्ववत् भनाइ बदलेर अन्तर्वार्ता दिएकी थिई । स शस्त्र द्व*न्द्वकाल देखि नै त*त्कालीन माओवादीबाट भूमिगत राजनीति गरेका शाहीका श्रीमान् पछिल्लो समय पनि उच्च तहका नेताहरूसँग सम्पर्कमै थिए ।
उनी श*क्ति बस्नेत गृहमन्त्री भएका बेला सचिवालयमा कार्यरत समेत थिए । शा*हीको यु*टर्नमा उनका श्रीमान् र महराका निकट केही व्यक्तिको भूमिका हुनसक्ने देखिन्छ । कान्तिपुरकर्मीसँग बुधबार बिहान पनि शाहीले घ*टनाबारे पत्रकार सम्मेलन गर्ने बताएकी थिइन् । उनले पत्रकार सम्मेलनको तयारी अरू कसैले गरिरहेको संकेत गरेकी थिइन् तर विस्तृत खुलाइनन् । पीडितले लिखित जाहेरी नदिएको भन्दै प्रहरीले पनि अनुसन्धान अगाडि बढाएको छैन । प्रहरीले उनको कोठाबाट प्रमाण भन्दै संकलन गरिएका मदिरा, गिलास, महराको भनिएको चस्माको टुक्रा, जुत्ताको तलुवा लगायतका सामग्री महानगरीय प्रहरी वृत्त तीनकुनेमै राखेको छ । जाहेरीको अभावमा ती प्रमाणको परीक्षण अगाडि नबढाइएको प्रहरीको भनाइ छ ।
Previous यसकारण तो*डियो रोशनी शाही र चित्रजंग शाहीको २८ वर्ष पुरानो दाम्पत्य जीवन !
Next पत्रकार शिवाकोटीलाई सु’रक्षा दिन युनियनको मा’ग !